Vhidhiyo Chirongwa: Zvikonzero zvishanu zvekuve nazvo
5 Zvikonzero Nei Rako Bhizinesi Rinoda A Vhidhiyo Kushambadzira Strategic
Chipiri, July 7, 2020 Mugovera, Kukadzi 27, 2021 Douglas Karr
Mwedzi uno ndanga ndichitora imwe nguva kune zvese kuchenesa yangu Zviteshi zveYouTube pamwe nekuve wakakomba nezve kuburitsa mamwe mavhidhiyo ekuperekedza zvinyorwa zvangu. Hapana mubvunzo kuti kune simba remavhidhiyo - ese ari maviri anorarama uye akanyorwa - pane zvekuita tarisiro uye vatengi.
99% yebhizimisi iyo yakashandiswa vhidhiyo gore rapfuura vanoti vanoronga kuenderera… saka zviri pachena kuti vari kuona kubatsira!
Vhidhiyo Kushambadzira Maitiro
Vhidhiyo yekushandisa yakawedzerawo nekushandisa nhare mumakore achangopfuura. Unlimited bandwidth uye zvemhando yepamusoro zvishandiso zvakaita kuti kuona vhidhiyo kunakidze pasikirini diki… kushambadzira vhidhiyo, pamwe nemavhidhiyo ane chekuita nebhizinesi, ari kutariswa kupfuura nakare kose.
Heino yakanaka anotsanangura video iyo yatakaburitsa makore apfuura ayo anotaura nezvakanaka zvevhidhiyo:
Heano zvikonzero zvishanu zvekuti mavhidhiyo anofanirwa kuverengerwa mune ako epamhepo kutengesa uye nzira dzekutengesa:
Kuchengetedza - kutsvaga nekugovana kunoenderera kutyaira vhidhiyo zvemukati nzira. Vhidhiyo ikozvino yaonekwa mukati 70% yemakumi epamusoro zana ekutsvaga mhinduro. Uye Youtube inoramba ichingova iyo # 2 nzvimbo yakatsvakirwa zvakanyanya muUnited States… mubvunzo ndewekuti kana kambani yako iripo mumavhidhiyo ekutsvaga mhinduro kana mavhidhiyo emakwikwi ako aripo?
Kuendesa ruzivo neimwe nzira - mavhidhiyo anotendera hunhu uye kugona kutsanangura nyaya dzakaoma nyore. Kunyangwe iri vhidhiyo yekutsanangudza senge iri pamusoro kana anodakadza mutengi chipupuriro… mavhidhiyo inzira inoshamisa yekutyaira chaiko kubatanidzwa.
Wedzera kutendeuka kwekutengesa - Mavhidhiyo pamapeji echigadzirwa uye mapeji ekumhara anotyaira mitengo yekutendeuka. Muchokwadi, maererano imwe kudzidza, kushandisa mavhidhiyo pamapeji ekumhara kunogona kuwedzera shanduko ne86%. Amazon, Dell, nevamwe vatengesi vepamhepo vakagovana manhamba kuti vhidhiyo yakatumirwa inogona kuwedzera mikana yemumwe munhu anotenga anosvika makumi matatu neshanu muzana ecommerce.
Deredza kusiiwa uye wedzera kugara-nguva - apo vanhu vakagadzirira vangangoita makumi maviri nemasere ezviuru zvemashoko ari papeji vasati vaenda, vhidhiyo inogona kubata mumwe munhu kwenguva refu.
Brand kubatanidzwa - Kuisa zvirinani, zvinonakidza, kana zvinonakidza zvemukati kunze uko kuti vanhu vazive zvinogona kubatsira kusvika kuvanhu vatsva kana kuchinja maonero nezveako marashi. Vhidhiyo inopa mukana wekuona uye unonzwika kubatana nemanzwiro nevateereri vako.
Kuumba zvinobudirira kushambadzira mavhidhiyo haisi nyore sezvazvinonzwika, zvakadaro. Nepo iyo software yekugadzirisa uye yekugadzirisa zvave nyore kushandisa, kukwikwidza kwemaonero kunotyisa. Youtube uye mamwe mavhidhiyo ekubata saiti anopa yakakura data yevaoni iyo inogona kukupa iwe zvishoma nzwisiso yekuti ndiani ari kuona ako mavhidhiyo uye mashandiro avakaita ... vashandise!
Ive neshuwa yekuteerera yedu ichangopfuura podcast naOwen weiyo Vhidhiyo Kushambadzira Chikoro kune mamwe matipi makuru!
Tags: zvikonzero zvevhidhiyozvikonzero zvekushambadzira vhidhiyovhidhiyo kushambadziravhidhiyo kushambadzira zanoYouTubeYouTube mavhidhiyo
Iwo Akakosha Ekutarisa Ezvinhu zveKumhara Pekugadzira peji